Neymar JR Oo Markale Mustaqbalkiisa Barcelona Shaki La Galinayo Iyo Agaasimaha Ciyaaraha Balaugrana Ee Robert Fernández Oo Ka Hadlay. - Laacib.net
Neymar JR Oo Markale Mustaqbalkiisa Barcelona Shaki La Galinayo Iyo Agaasimaha Ciyaaraha Balaugrana Ee Robert Fernández Oo Ka Hadlay.
Wargayska Sport ee Barcelona ka soo baxay ayaa ku waramay in Neymar JR aanu raaxo ku dareemayn Barcelona isla markaana ay dad isaga ku xeerani wali doonayaan in uu xidiga ree Brazil isaga baxo Barcelona iyaga oo u sheegaya in uu markasta kan labaad u noqon doono Lionel Messi. Inkasta oo uu Neymar JR markasta sheego in uu Camp Nou ku faraxsan yahay, haddana waxaa markale soo baxaya warar sheegaya in dad ay ku dhiiro galinayaan in aanu sida Messi waayihiisa ciyaareed ku dhamaysan Barcelona.
Laakiin agaasimaha ciyaaraha Barcelona ee Robert Fernandez oo saxaafada la hadlayay ayaa wax laga waydiiyay xaalada Neymar JR wuxuuna su’aal galiyay haddiiba ah jirto koox bixin karta lacagta heshiiskiisa lagu burburin karo balse Fernandez ayaa cadeeyay in aanu jirin wax dalab ah oo ciyaartoyda Barcelona miiska u saarani.
Kooxaha Real Madrid, Manchester United, PSG iyo Manchester City ayaa ah afarta kooxood ee waqti dheer lala soo xidhiidhinayay in Neymar JR ay bixin karaan lacagta heshiisiisa lagu burburin karo oo hadda noqotay 222 euros iyada oo waliba uu qiimihiisa suuqu gaadhi doono 250 miyan oo euros.
Agaasimaha ciyaaraha Barcelona ee Robert Fernandez oo ka jawaabayay su’aal mustaqbalka Neymar JR ee Barcelona la xidhiidha ayaa yidhi: “Barcelona uu ka maqan yahay Neymar miyaa? Wax dhici doona ma aha, sababtoo ah kooxi ma bixin doonto lacagta heshiiskiisa lagu burburin karo”.
Laakiin Roberto Fernandez ayaa meesha ka saaray in wax dalab ahi uu miiska u saaran yahay ciyaartoyda kooxdiisa kowaad wuxuuna yidhi: “Ma jiraan wax dalabyo ah oo ciyaartoy kooxda ka tirsan lagu doonayaa”. Laakiin ciyaartoyda ay la soo wareegi karaan ayuu yidhi: “Wax fiican ayay ahaan lahayd in aan helno ciyaartoy ka ciyaara saddexda boos ee garabka midig, bidix iyo weerarka dhexe, hal boos oo kaliya waxaa ku jiraanaya daqiiqadaha uu ciyaarayo”.
Dhinaca kale Robert Fernandez ayaa xaqiijiyay in wali Barcelona ay doonayso saxiixa Marco Verratti laakiin waxa uu meesha ka saaray in Ivan Rakitic ama Andre Gomes ay qayb ka noqon karaan heshiiska ay ku doonayaan xidiga ree Talyaani ee Verratti.